Sideen Uheli Karaa Inaan Dajiso? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 520
Dad badan ayaa rumeysan in Pinterest uu yahay madal adag oo loo adeegsado meesha aysan ka jirin suurtagalnimada inuu ka mid noqdo dadka ugu badan ee laga daawaday madasha. Si kastaba ha noqotee, qaybta internetka dhexdeeda, siyaabo kala duwan oo horay loogu socdo ayaa la fulin karaa iyada oo aan loo baahneyn in la waxyeeleeyo keydinta aaladaha.
Si kastaba ha noqotee, maanta waxaa jira fursado badan oo lagu go'aaminayo sida codsiyada qaarkood loo isticmaali karo iyada oo aan loo baahnayn in la furo codsi gaar ah goobta. Tani shaki la'aan, waxay nasasho u tahay kuwa jecel dunida elektaroonigga ah iyo waliba kuwa doonaya inay helaan walxo wanaagsan oo ka fogeeya dhammaan qalabka waxyeellada leh.
Marka hoosta waad arki kartaa sida loo yeesho Pinterest adoon soo dagsan arjiga, iyo sidoo kale ku raaxeysiga madal dhib la'aan. Tan oo dhan waxay ku mahadsan tahay dadaalka joogtada ah ee shaqaalaha adduunka elektarooniga ah.
Suurtagal ma tahay in la yeesho Pinterest iyada oo aan la soo dejin?
Si aad uga jawaabto su'aashaan, uma baahnid inaad in badan ku dul deg degto arrinta maxaa yeelay waxaa suurtagal ah in si joogto ah loogu isticmaalo Pinterest gudaha barxadda adigoon soo dejisan codsi. Thanks to noocan oo kale ah xaaladaha isticmaaleyaashu maahan inay waqti badan ku qaataan ka saarista walxaha qaar si ay boos uga dhigto.
Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waxaa jira fursad kasta oo madasha ay si buuxda ugu shaqeyso iyadoon xad lahayn. Marka intaas oo dhan la eego, waxaan hoos ku tusi doonaa sida hel marinka barta Pinterest iyada oo aan loo baahnayn in lagu soo dejiyo arjiga qalabka elektiroonigga ah.
Miyuu Pinterest qabtaa meelo badan?
Bogga Pinterest ma qaato boos badan, dhab ahaantii waxa sababi kara xoogaa adeegsi ah kaydinta ayaa ah biinanka lagu keydsado barta dhexdeeda. Marka tan la eego, fikrad fiican ayaa ah inaad ku hayso faylasha kaarka SD-ka si looga fogaado wax dhibaato ah
Talaabooyinka lagu helayo Pinterest adigoon soo dejisan
Hadda, shaqo badan ma qaadato si loo helo faa'iidada isticmaalka Pinterest iyadoo la raacayo sharciga ah inaan la helin buuxda ee ku kaydinta barnaamijka. Marka tan la helo, waxaan ku tusi doonaa tillaabooyinka hoose si aad si fiican wax u barato oo aad u hesho suurtagalnimada inaad naftaada ku tamariso barxadda.
Gali barta Pinterest
Haddii aad diiwaangashan tahay ama aadan lahayn, mid ka mid ah talaabooyinka la raacayo ayaa ah in la abuuro emayl wadajir ah oo leh lambar sir ah si aad u awoodo inaad gasho qalabka. Sidoo kale waa macquul ku xirmaan xogta koontooyinka Google ama Facebook.
Markaad soo gasho xogta saxda ah, waxaad ka heli doontaa bog dib u habeyn ah oo aad ku sii wado howlaha ka dhex jira.
Ma jiraan wax ka sii macaan Pinterest gudahood oo ah inaad awood u leedahay inaad doorato wax kasta oo aad rabto inaad aragto, iyo bilowga bogga wuxuu kobciyaa nuucyada noocan ah. Marka waa inaad heshaa waxa aad jeceshahay oo aad ugu isticmaasho dantaada.
Ku dhaji Pinterest taleefankaaga
Tallaabada ugu dambeysa, ka dib markaad cusbooneysiiso qalabka oo dhan, waa inaad haysataa suurtagalnimada inaad raadiso xulashooyinka dejinta: "Ku dhaji bogga koowaad." Halkaas ka dib, waxaad marin buuxda u heli kartaa bogga wakhti kasta oo maalinta ka mid ah.
1 Suurtagal ma tahay in la yeesho Pinterest iyada oo aan la soo dejin?
1.1 Miyuu Pinterest qabtaa meelo badan?
2 Talaabooyinka lagu helayo Pinterest adigoon soo dejisan
2.1 Gali barta Pinterest
2.2 Xulo xulashadaada
2.3 Ku dhaji Pinterest taleefankaaga